Cunto Kariyayaasha Madaxweynayaasha Caalamka Oo Is Dhaafsaday Sir Ku Saabsan Waxyaabaha Ay Xiiseeyaan Madaxdoodu - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Cunto Kariyayaasha Madaxweynayaasha Caalamka Oo Is Dhaafsaday Sir Ku Saabsan Waxyaabaha Ay...
Dabaakhiinta Jikada ugu Jira Madaxda Caalamka oo dhawaan kulankoodii labaad ee aqoon korodhsi isugu yimid magaalo madaxda wadanka Faransiiska ee Paris ayay halkaasi kaga sheekaystay waxyaabaha dhinaca cuntada marka laga hadalyo ay xiiseeyaan madaxda caalamka ee ay cuntada u diyaariraan iyaga oo mid mid uga sheekeeyey, saxaafadduna si qarsoodi ah xogtan uga heshay. Inkasta oo aan loo ogolayn in ay fashilaan nidaamka cunto qaadasho ee madaxda caalamka hadana kooxdan dabbaakhiinta ahi waxa ay siyaalo kala duwan uga sheekaysteen hadba wixii sir ay ka hayeen Jikada (Madbakha) ay ugu jiraan masuuliyiinta ugu sarraysay dalalka maanta adduunka ugu awoodda badan. Kulankan labaad ee ay isugu yimaadeen magaalada Paris Cunto-kariyayaasha madaxtooyooyinka adduunka ugu waaweyni waxa ay ujeedadiisu ahayd tababar heer sare ah oo ku saabsan dhinaca cunto karinta maadaama shaqada ay hayaan si weyn ula xidhiidho caafimaadka iyo nolosha madaxda caalamka. Hadaba dabbaakhiintu waxyaabihii kulankoodaasi laga soo wareiyay waxa ka mid ahaa:
1- Madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin waxa uu kuuggiisa gaarka ahi sheegay in uu iska ilaaliyo in uu cunto kali ah qaato. Isaga oo marka cuntada la soo dhigo dhammaan kolba qayb wax yar ka qaata isaga oo mar walba ka shakisan in la sumeeyo. Putin waxa uu aad u jecel yahay cuntooyinka dhaqan ee Ruushka gaar ahaan kuwii la cuni jiray qarniyadii dhexe isaga oo aan afka cuntada gelin illaa laga dhadhamiyo oo dhawr qofi qaataann. Taasi oo ay u gaynayso cabsi uu ka qabo in la sumeeyo.
2- Madaxweynaha waddanka Faransiiska Francoise Holland ayaa la sheegay in uu aad u jecel yahay burcadka caanaha laga sameeyo. Waxa uu xarunta Elise ee dalka Faransiiska looga arrimiyo keenay haweenay si gaar ah ugu takhasustay samaynta iyo shiilidda subagga burcadka ah isaga oo cuntada ku darsada waana dhaqan ay leeyihiin qoyska uu masuulkani ka soo jeedo isaga oo aan u joojin digniinaha dhakhaatiirta ee ah in la iska ilaaliyo dufanka badan.
3- Madaxweynaha Maraykanka Barrack Obama ayaa la sheegay in uu jecel yahay khudaarta oo aanu aad u qaadan hilibka iyo waxyaabaha baruurta leh. Mar la waydiiyay arrinkaasi waxa uu sheegay in uu neceb yahay in jidhkiisa ay baruuri fuusho si uu dhallinyaranimadiisa iyo jalaqsanaantiisa u ilaashado. Michel Obama, xaaska madaxweynaha ayaa guriga cad dib ugu soo celisay kuuggii caanka ahaa ee cuntada u diyaarin jiray Bill Clinton oo uu sheegay in uu ku wanaagsan yahay cuntada khudaarta ka samaysan. Obama waxa uu mar walba jecel yahay in uu cunto fudud oo khudaar ka samaysan qaato.
4- Angela Merkel, Chancellor-ka Jarmalka ayaa iyana looga taag la’ yahay oo si ba’an u jecel Shukulaatada iyo macmacaanka sida xalwadaha. Dhakhtarkeeda ayaa khaati ka taagan oo mar walba caafimaadkeeda uga baqanaya macmacaanka islaantaasi lagu ibtileeyey.